Mango dzamutsa hondo | Kwayedza
Mango dzamutsa hondo
01 Mar, 2019 - 00:03	 2019-02-28T21:19:17+00:00 2019-03-01T00:00:28+00:00 0 Views
VANHU vaive mudare vakaita sevachatyoka mbabvu nekuseka apo muzukuru aipopotedzana nesekuru naambuya vake achiti vari kumurambidza kutemha mango.
Elemencia Chingwaru akamhan’arira Taliban Phinias anove hanzvadzi yaamai vake nemudzimai wake – uyo asina kudomwa zita rake mudare reHarare Civil Court – achiti vari kumushungurudza.
“Vanonditadzisa kutemha mango, vachindituka semwana mudiki izvo zvandishaisa rugare. Ndinokumbira gwaro rerunyararo nekuti ndinoda kutemha mango dzangu zvakanaka. Uyezve handidi kutukwa nekushoropodzwa,” anodaro Chingwaru.
Phinias anoti nyaya yemango yave kuvapesanisa pahukama hwavo.
“Vanobvumidzwa kutemha zvavo mango dzavo nekuti nyaya yemango yatopesanisa hama,” anodaro.
Mutongi Noah Gwatidzo akapa Chingwaru gwaro redziviriro.